dji mavic | Tendrombohitra goavam-be, Tendrombohitra Jizera, Paradisan'i Bohemia
Vakio bebe kokoa>
Diabe fohy tamin'ny Febroary teo amin'i Roudnice tao amin'ny Tendrombohitra Giant. Roudnice dia tanàna iray, ampahany amin'ny tanàna Jestřabí ao Krkonoše any amin'ny distrikan'i Semily. Ny manodidina ny 2 km atsimo-atsinanan'i Jestřabí any amin'ny Tendrombohitra Krkonoše. Misy adiresy 80 voasoratra. Mipetraka eto ny mponina 47. Roudnice dia mipetraka ao amin'ny faritra Cadastre de Roudnice ao amin'ny Tendrombohitra Krkonoše miaraka amin'ny faritra 2,19 km2. Roudnice dia mitoetra ao ambadika [...]
Midadasika kokoa ny tendrombohitra Sinay rehetra anisan'izany ny Goavana efa teo ihany ny fahiny nofaritana ho toy ny Sudetenland, izay angamba ny anaran 'selta fiaviana (indrindra matetika adika hoe tendrombohitra lambo) na Balkan niaviany (adika hoe Goat Mountain). Ptolémée (about 85-165) ampiasaina amin'ny anarana Sudetenland ankehitriny Sudetayle (ny akora Tendrombohitra) sy Askiburgion (indrindra fa ny tendrombohitra, akaikin'ny tanàna Askiburgium fanimban-javatra, angamba ny [...]
Hruboskalsko avy amin'ny haavony
Hruboskalsko dia natiora natokana ho an'ny 22. April 1998. Ny 219,2 ha dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra ao amin'ny faritra Bohemian Paradise Protected Landscape. Ny anton'ilay fiarovana dia tanàna rock manan-tantara misy ireo relika voatokana. Ny tanàn-dehiben'i Hruboskalské dia ahitana vato maromaro an-jatony ary tilikambo misaraka miakatra amin'ny elany hatramin'ny 60 m. Noho ny tsy fitoviana kely amin'ny sandstone sy maharitra [...]
Benecko dia tanàna Krkonoše any Jilemnicka, any avaratra atsinanan'ny distrikan'i Semily. Misy faritra valo (Benecko, Dolni Stepanice, Horni Stepanice, Mrklov, Rychlov, Stepanicka Lhota, Zákoutí ary Žalý). Mipetraka ao amin'ny 1 100 izy io. Ny ivon'ny fahantrana ao amin'ny faritra tombony dia niova tsindraindray taorian'ny dingana ara-toekarena. Ny foiben-toerana manan-tantara tany Horní Štěpanice - [...]
Les Reservations de Waterloo Království - Carp Rod & Praga V3S
Forest Fanjakana dia lohasaha tohodrano drano amin'ny renirano Elbe, naorina 1920. Izany no misy akaikin'ny Hamlet Těšnov fitantanan-draharaha ao amin'ny faritra Bila Tremesna, 4 km manokana eo ambony avy ao amin'ny tanànan'i Dvur Kralove nad Labem, ao amin'ny lohasaha tery, izay mandalo Kocléřovským indray. Ary tamin'ny ankavia banky dia nanamorona ala fanjakana lehibe, ny sisa tamin'ny sisin taloha ala, ary avy eo nahazo [...]
Tendrombohitra goavam-be (Riesengebirge alemà, Poloney Karkonosze) no totalin'ny geomorphological sy ny tendrombohitra avo indrindra amin'ny Czech sy ny Highlands. Any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Královéhradecký no misy azy andrefana ao atsimon'ny faritr'i Silesia. Ny tendrombohitra avo indrindra ao amin'ny Tendrombohitra Giant dia Sněžka (1603 m). Araka ny tsaho, ny Tendrombohitra Krkonoše dia miambina ny toe-tsaina Krakonoš izay angano. Io dia iray amin'ireo faritra be tendrombohitra indrindra any amin'ny Repoblika Tseky. [...]
Lohataona jerena Rokytnice sy ny manodidina avy any ambony. Rokytnice nad Jizerou (Rochlitz tamin'ny teny alemà) dia tanàna iray ao an-tendrombohitra ala nenina tendrombohitra andrefana. Miorina ao amin'ny faritra Liberec, Semily distrika, amin'ny lohasaha elongated Huťský Stream eo amin'ny tendrombohitra massifs Guard (782 m) Devoly An-tendrombohitr'i (1022 m) sy Lysa Hora (1344 m) sy teny an-ankavia (atsinanana) [...]
Golf Course Golf Club Semily avy amin'ny haavon'ny 14.04.2018. Ny Golf Course Semily dia miorina eo amoron'ny reniranon'i Jizera hatramin'ny 1970. Manodidina ny Semil dia faritra misy lohasaha lalina ahitana ny arabe ao amin'ny Reniranon'i Jizera sy ny renirano miaraka amin'ny reniranon'i Oleška, Jílovecký ary Chuchelský, Kamenice sy Vosmenda. Ny romansin'ny Reniranon'i Jizera dia manamafy ny Rieger Trail, izay manome galeria valo-polo, [...]
Sushi dia fitahirizam-bokatra miaraka amina renirano iray ao amin'ny reniranon'i Černá Desná. Mianjera eo ambanin'ny Labe River Board, orinasam-panjakana, monina any Hradec Králové. Ny orinasa Jablonec nad Nisou dia mitantana ny zaridaina. Ny tanjon'ny riandrano dia ny fametrahana rano mba hiantohana ny fanangonana rano mangatsiaka ho an'ny famatsian-drano any anaty ala amin'ny lanjany 320 l / s, fampihenana ny rano lehibe, ampahany [...]
Ny tanàna Haje nad Jizerou Faritany Semily District any amin'ny faritra Liberec, eo afovoany ny rohy eo amin'ny tanàna Semily sy Jilemnice, teo amoron 'ny Renirano Jizera (Grove teo amin'ny ankaviany banky, ny ampahany hafa eo ankavanana). Mipetraka eto ny mponin'i 682. Teo aloha, ho an'ny 1. 3. 2001, mponin'i 637 dia nitatitra tsy tapaka tao an-tanàna, izay 302 tao an-tanànan'i Dolní Sytová, [...]
Smart drôna - 4K fakan-tsary 3osou stabilization ho tonga 7km, 27min momba ny fiaretana, max. Speed ​​65km / h, 734g lanjany, GPS, microSD (max.64GB), sakana ho tratra asa TAPFLO sy ActiveTrack. Drôna manan-tsaina dia afaka mba tsy sakana sy hitsingevana fotsiny. Ny rafitra dia ahitana ny FlightAutonomy 5 fakan-tsary, GPS sy GLONASS, 2 ultrasonic lavitra Sela Mpandray Hafanana, teny Sela Mpandray Hafanana sy 24-fampisehoana computing [...]
Paseky nad Jizerou mijery ny haavon'ny 06.04.2018. Paseky nad Jizerou dia tanàna kely iray any amin'ny distrikan'i Semily, any amin'ny faritr'i Liberec, any amin'ny Tendrombohitra Giant tandrefana eo amin'ny sisin'ny Tendrombohitra Jizera, eo ankavanan'ny Jizera Mine. Mipetraka eto ny mponin'i 252; trano sy tranobe maro no manompo androany amin'ny fialan-tsasatra. Ny faritra avaratry ny tanàna dia an'ny Valan-javaboarin'i Krkonoše, faritra atsimon'ny [...]
Nístějka trano mimanda sisa tavela eo amin'ny Toerana avo ambonin'ny confluence ny Jizera sy Farského Creek sy manerana ny arabe I / 14, ao amin 'ny tsangambato voajanahary. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Ny Keramika dia manaporofo ny fisian'ny olombelona na dia ao anatin'ny 17 aza. St. Voatahiry tratra tilikambo manodidina, lapa sy ny an-tsaha mandany residues. Ny sisa tavela amin'ny lapa dia voaro toy ny [...]
Ny tanànan'i Jablonec nad Jizerou dia miorina ao amin'ny distrikan'i Semily any amin'ny faritr'i Liberec. Mipetraka ao amin'ny 1 700 izy io. Hatramin'ny Jablonec nad Nisou teo aloha (teo aloha antsoina hoe Jablonec nad Jizerou), nampiasaina koa ny anaran'i Jablonec na Jablonec. Ny anaran'i Jablonec nad Jizerou dia ampiasain'ity tanàna ity hatramin'ny 1916. 1492 dia tao amin'ny [...]
Rokytnice nad Jizerou (German Rochlitz) dia tanàna iray sy tendrombohitra any amin'ny Tendrombohitra Giant Tendrombohitra. Miorina ao amin'ny Liberec faritra, Semily distrika, amin'ny elongated lohasaha Huťský Stream eo amin'ny tendrombohitra massifs Guard (782 m) Devoly An-tendrombohitr'i (1022 m) sy Lysa Hora (1344 m) sy teny an-ankavia (atsinanana) amoron'i Neily Jizera. Misy mponina eo ho eo 2 700. [...]
Midadasika kokoa ny tendrombohitra Sinay rehetra anisan'izany ny Goavana efa teo ihany ny fahiny nofaritana ho toy ny Sudetenland, izay angamba ny anaran 'selta fiaviana (indrindra matetika adika hoe tendrombohitra lambo) na Balkan niaviany (adika hoe Goat Mountain). Ptolémée (about 85-165) ampiasaina amin'ny anarana Sudetenland ankehitriny Sudetayle (ny akora Tendrombohitra) sy Askiburgion (indrindra fa ny tendrombohitra, akaikin'ny tanàna Askiburgium fanimban-javatra, angamba [...]
Đi Mavic Pro dia kely, nefa mahery drôna, noho izay ny lanitra tonga lamba ho an'ny fahaiza-mamorona, mora foana sy tsy misy mampanahy, ka manampy anao hamorona fotoana rehetra ny Torque rivotra. Ny efajoro voalamina tsara fivarotana tena sarotra ny teknolojia ny Mavic Pro mahatonga lavitra be pitsiny indrindra fakan-tsary đi manidina. 24 fampisehoana computing cores, rafitra vaovao tanteraka ho an'ny isan-karazany ny fifindran'ny hatramin'ny 7 km [...]
Avy amin'ny Bystré ho any Rybnice sy Loukova
Fijerin'ny ririnina amin'ny diany Bystro, Rybnice sy Loukov 26.01.2018 tolakandro. Ny tanàna Haje nad Jizerou Faritany Semily District any amin'ny faritra Liberec, eo afovoany ny rohy eo amin'ny tanàna Semily sy Jilemnice, teo amoron 'ny Renirano Jizera (Grove teo amin'ny ankaviany banky, ny ampahany hafa eo ankavanana). Mipetraka eto ny mponin'i 682. Teo aloha, ho an'ny 1. 3. 2001, dia [...]